ဆောင်းပါးကဏ္ဍ Archives •
အရမ်းကောင်းတဲ့ ပုံပြင်လေးပါ အချိန်လေးနဲနဲပေးပြီး ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်စေချင်ပါတယ်
အရမ်းကောင်းတဲ့ ပုံပြင်လေးပါ အချိန်လေးနဲနဲပေးပြီး ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်စေချင်ပါတယ် Hotelကြီးတစ်ခု ရဲ့ စားသောက်ခန်းထဲကို ဧည့်သည်နှစ်ယောက်ဝင်လာတယ်…တံခါးဖွင့်သံကြားတော့အဖြူရောင်အင်္ကျီပေါ်မှာ နက်ပြာရောင်ကုတ် နက်ပြာရောင်စကပ်တိုဒူးဖုံးနဲ့ စားပွဲထိုးမိန်းကလေးက လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ “မင်္ဂလာပါ ရှင်…” လို့ချိုမြတဲ့ နှုတ်ဆက်သံနှင့်အတူ စားပွဲထိုးမိန်းကလေးက ရိုသေစွာခါးကိုင်းလိုက်တယ် … ဝင်လာတဲ့ဧည့်သည်တွေက ကျားမ တစ်တွဲဖြစ်တယ် အသက် Continuous reading
ငါ့ကို ဘိုးဘွားရိပ်သာ ပို့ပေးပါ ၁၉၉၁ ခုနှစ် “သားကြီး ကျောင်းသွားတော့မှာလား” “ဟုတ်ကဲ့ဖေဖေ” “စာကြိုးစားတဲ့ သားကြီးကို မုန့်ဖိုးအများကြီး ပေးရမှာပေါ့ကွ” “အဖေကြီး…ရှင့်သားကို ကျွန်မ-မုန့်ဖိုးပေးပြီးသားလေ တော်ရဲ့” “ဟာ…မင်းပေးသလို ငါလည်း ပေးမှာပေါ့ကွ၊ ငါ့သားကြီးက စာတော်တဲ့သားကွ” “ရော့…သားကြီးအတွက် မုန့်ဖိုး။ ဒါက ဖေဖေပေးတာနော်” ၂၀၀၂ Continuous reading
ဦးနေဝင်းအစိုးရကို တော်လှန်ခဲ့တဲ့ မယ်ဗမာ နော်လီဇာဘင်ဆင်ရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်း
10/08/2019 Yan Naing 0
ဦးနေဝင်းအစိုးရကို တော်လှန်ခဲ့တဲ့ မယ်ဗမာ နော်လီဇာဘင်ဆင်ရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်း ပိတောက်တွေ ပွင့်ပြန်ပြီ ဘင်ဆင်ရေ “သူ့ရဲ့ဘယ်ဘက် ပါးဖောင်းဖောင်လေးပေါ်မှာ သူ့အလှကို ပိုဖြည့်စွက်ပေးတဲ့ မှည့်သေးသေးလေးတလုံး ရှိတယ်။ ကြင်နာတတ်တဲ့ အသည်းနှလုံးရှိပြီး နိုက်တင်ဂေးငှက်လို သာယာတဲ့အသံနဲ့ တေးဆိုတတ်တဲ့ ရေဒီယို အဆိုတော်တစ်ယောက်။ ဖလင်ကော်ပြားပေါ်ကနေ ကြည့်သူကို ကြည်နူးမှုအပြည့် ပေးနိုင်စွမ်းခဲ့တဲ့သူ။ ပြည်သူ့အကျိုး၊ Continuous reading
20/07/2019 Thu Yay 0
အမေ မသေခင်နမ်းကြ ! သေမှ မတမ်းတနဲ့ အိပ်ယာ ကနိုးပေမယ့် ရုံးပိတ်ရက် မို့ ထမသေးပဲ နှပ်နေသော သူ မိန်းမရဲ့ ခပ်တိုးတိုးစကားကြောင့် ခေါင်းထောင်သွားသည်။ “ဘာဖြစ်လို့လဲ မိန်းမ ရဲ့ ”“ဘုရားပန် တွေဝယ်လာတာတဲ့ ၊ ကျူးလစ်ပန်း. တွေလေ ..တခက်တခက်ကိုဈေးကြီးပေးပြီး ပန်း Continuous reading
16/07/2019 L H 0
Free Mason ရှာပုံတော် Free Mason နှင့် ပတ်သက်သမျှ ဖရီးမေဆင်ဂိုဏ်း (သို့မဟုတ်) တစ်ချို့က ပသျှူးခေါင်းပြတ်ဂိုဏ်း ဟု သိကြသည်။ အထူးသဖြင့် ကွယ်လွန်သူ စာရေးဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ ၏ စနေမောင်မောင်ဇာတ်လမ်းများတွင် ထိုအသင်းကြီး နှင့် ပတ်သက်ပြီး အတော်များများသတိထားမိခဲ့ကြသည်။ ဆရာကြီး၏ ဇာတ်လမ်းများက Continuous reading
08/07/2019 Thu Yay 0
သင့်ကလေးကို ဆရာဝန်ထံ ပြသင့်နေပြီဟု သတိပေးနေသော လက္ခဏာများ
29/06/2019 Thu Yay 0
သင့်ကလေးကို ဆရာဝန်ထံ ပြသင့်နေပြီဟု သတိပေးနေသော လက္ခဏာများ ကလေးနေမကောင်း ဖြစ်ပြီဆိုရင် မိဘတွေ စိတ်ပူပန်ကြရပါတယ် ။ ကလေးနေမကောင်းတဲ့ လက္ခဏာတွေကို အချိန်မီ သိထားရင် အရမ်း မပင်ပန်းတော့ပါဘူး ။ ကလေး ကျန်းမာရေးအတွက် မေ့လျော့မထားသင့်တဲ့ အချက်လေးတွေ ရှိပါတယ် ။ ၁။ မှဲ့ Continuous reading
ကိုယ့်ရဲ့ သားသမီးက လိင်တူ စုံမက်သူ ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်
ကိုယ့်ရဲ့ သားသမီးက လိင်တူ စုံမက်သူ ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ဇွန်-၂၉၊ ၂၀၁၉ ကိုယ့်ရဲ့ သားသမီးဟာ လိင်တူ စုံမက်သူ တစ်ယောက်မှန်း သိလိုက်ရတဲ့ အခိုက်အတန့်ဟာ မိဘတွေအတွက် ဘဝမှာ အကြီးမားဆုံး စိန်ခေါ်မှုတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အများစုက ထိတ်လန့်တာ၊ စိတ်ပျက်တာ၊ ဒေါသထွက်တာတွေနဲ့ တုံ့ပြန်လေ့ ရှိကြပါတယ်။ Continuous reading
17/06/2019 Thu Yay 0
အကယ်ဒမီ ‘ဒွေး’ ပြောခဲ့တဲ့ ပုံပြင်ကို အခုထိ မမေ့သေးတဲ့ ဦးထွန်းလွင် ပညာရှင်အစစ် တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့တာ… ၁၆-၆-၂၀၁၉၊ ည(၁၁း၀၄)နာရီ…. အကယ်ဒမီ “ဒွေး” ပြောတဲ့ “ပညာရှင်ဆိုတာ”၊ ကျွန်တော် ၂၀၀၉ ခုနှစ် မေလမှာ မိုးလေဝသဌာနမှ အငြိမ်းစားယူတော့ ဂျာနယ်လစ်တွေက ကျွန်တော်ပါတဲ့ သတင်တွေ ရေးတဲ့အခါ Continuous reading
Total Hits : 1238686